SOMALI SWEDISH AH OO KU GEERIYOODAY XABSI | RunsheegNews
SOMALI SWEDISH AH OO KU GEERIYOODAY XABSI
37 jir Somali-Swedish ah ayaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday xabsi ku yaala dalka Maraykanka,waxaa loo haystay xagjirnimo waa sidaan tariikhdiisu.
2008 labo nin oo 27 iyo 29 jir ah oo haystay dhalashada dalka Sweden ayaa u safray dalka Soomaaliya.
2012 August labada nin iyo nin u dhashay dalka Ingiriiska ayaa lagu qabtay iyaga oo usoo gudbaya xadka dalka Djibouti,oo ah dal yar oo Soomaaliya xuduud la leh.
Waxaa lagu eedeeyay in ay taageeraan ururka xag-jirka ah ee Al-shabaab,hay,adda danbi baarista Sweden Säpo ayaa joojisay in ay baarto nimankaas maadaama aan waqtigaa loo aqoonsanayn in taageerida Al-Shabaab ay danbi ka tahay dalka Sweden.
Dalka Maraykanka ayaa baaris dheeraad ah ku sameeyay nimankaas in ay taageeraan oo ay ficilo xag-jirka ah ku jireen taas oo haddii lagu helo lagu xukumi karo xabsi daa,in.
2012 October dowlada maraykanka ayaa waydiisatay dhigeeda Sweden in ay ka caawiyaan xog-dheerad ah,waqtigiiba dowladda Sweden ayaa u gudbisay xog maqalka telefoonka ah oo laga duubay labada nin danbi baarista dalka Maraykanka.
2012 November Sweden waxa ya codsatay in dalkeeda loo soo gudbiyo labada nin balse waxaa laga qaaday dalka Djibouti loona dhoofiyay Maraykanka.
2013 waxaa aad u xoogaystay in gudaha dalka Sweden aad looga hadlo xariga labada nin oo Sweden u dhashay ee xabsiga Maraykanka ku jira,Mid ka mid ah labada nin ayaa sheegay in aad loogu jir dilay markii ay ku jireen xabsiga dalka Djibouti.
2016 ayaa lagu xukumay in ay ka tirsanaayeen kooxda xag-jirka ah ee Al-shabaab sida hay,adda FBI ay sheegtay waxaa loo tababaray in ay noqdaan naftood hurayaal xabsiga ugu dheer oo lagu qaadi karana uu yahay 11 sano.
2020 mid ka mid ah labada nin ayaa ugu geeriyooday xabsiga cudurka coronavirus isaga oo 37 jir ah,waxaa lagu waday in lasii daayo hal sano iyo bar kadib.
somali sweden prison covid/19 warka maanta runsheegnews